Wararka - Maxay ku kala duwan yihiin khadadka biyaha ku saleysan iyo khad saliid salka ku haya oo loogu talagalay mashiin sawir leh?
Khadka saliidda ku saleysan waa in lagu milo midabka saliidda, sida saliidda macdanta, saliidda cuntada, iwm. Khadku wuxuu u hoggaansamaa dhexdhexaadka saliidda dhexdeeda iyo uumiga qalabka daabacaadda; khad biyo ku saleysan ayaa u adeegsada biyaha sidii qalabka wax lagu kala firdhiyo, khadkuna wuxuu ku yaalaa qalabka wax lagu daabaco Midabku wuxuu kuxiran yahay dhexdhexaadka iyada oo loo marayo biyo gelinta iyo uumiga.
Faa'iidooyinka ku jira warshadaha sawirrada ayaa lagu kala soocaa iyadoo loo eegayo isticmaalkooda. Waxaa loo qaybin karaa laba nooc: Mid waa, gashiga biyaha ku shaqeeya, oo isticmaala biyaha iyo dareeraha biyaha ku milma sida qaybaha ugu muhiimsan ee kala diraya midabka salka. Midda kale waa khad saliid salka ku haya, kaas oo isticmaala dareeraha aan biyaha ku milmin sida qaybta ugu weyn ee kala dirta salka midabka. Marka loo eego milanka solvents, waxay sidoo kale loo qaybin karaa saddex nooc. Ugu horreyn, maaddooyinka ku saleysan dheeha, ee ku saleysan dheeha, ayaa hadda waxaa isticmaala inta badan mashiinnada sawirrada gudaha; tan labaad, khaanadaha midab-ku-saleysan, ee ku saleysan maaddada ku saleysan Midabka waxaa loo isticmaalaa daabacadaha inkjet-ka banaanka. Midda saddexaad, khad-baabi'iyaha deegaanka, meel u dhexeysa, waxaa loo isticmaalaa mashiinnada sawirrada bannaanka ah. Feejignaan gaar ah waa in la siiyaa seddexdan nooc ee hargabku iskuma qasmi karo Mashiinnada ku saleysan biyaha waxay isticmaali karaan oo keliya maaddooyinka biyaha ku saleysan, iyo mashiinnada saliidda ku saleysan waxay isticmaali karaan oo keliya maaddooyinka dareeraha daciifka ah iyo maaddada dareeraha. Sababtoo ah gulufyada khadadka, dhuumaha, iyo nozzles-ka mashiinada ku saleysan biyaha iyo saliida ayaa ku kala duwan marka mashiinka la rakibo, Sidaa darteed, khadku si aan kala sooc lahayn looma isticmaali karo.
Waxaa jira shan arrimood oo waaweyn oo saamaynaya tayada khadaka: kala firdhinta, kala qaadista, qiimaha PH, kacsanaanta dusha, iyo nafwaayaha.
1) Kala firidhsan: Waa wakiil firfircoon oo dusha sare ah, shaqadiisu waa in la hagaajiyo sifooyinka jireed ee dusha khadku leeyahay, isla markaana kor loogu qaado isku-xidhka iyo qoyaanka ee khadka iyo isbuunyada. Sidaa darteed, khadku ku keydsan yahay kuna dhex socdo isbuunyada guud ahaan wuxuu ka kooban yahay firidh.
2) Dhaqdhaqaaqa: Qiimahan waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo heerka ay ku jirto milixdu. Fursado tayo sare leh, milixda ku jirta waa inaysan ka badnaan 0.5% si looga fogaado sameynta kristantarrada sanka. Khadka saliida ku saleysan ayaa go'aaminaya biiyaha loo isticmaalayo iyadoo loo eegayo cabirka walxaha midabka. Daabacayaasha waaweyn ee inkjet 15pl, 35pl, iwm ayaa go'aamiya saxnaanta daabacaadaha inkjetka iyadoo loo eegayo cabirka walxaha. Tani waa mid aad muhiim u ah.
3) Qiimaha PH: waxaa loola jeedaa qiimaha pH ee dareeraha. Xalka aashitada badan, ayaa hoos u dhigaya qiimaha PH. Taa bedelkeeda, sida ay u badantahay xalka alkaliinku, wuxuu sare u kacayaa qiimaha PH. Si looga hortago in khadku xoqdo mashiinka, qiimaha PH guud ahaan waa inuu u dhexeeyaa 7-12.
4) Xiisadda oogada: Waxay saameyn ku yeelan kartaa in khadku sameysan karo dhibco. Khadka tayada wanaagsan ayaa leh naftiis hooseeya iyo kacsanaanta dusha sare.
5) Viscosity: Waa iska caabbinta dareeraha qulqulka. Haddii sunta khadku ay aad u ballaaran tahay, waxay carqaladeyn doontaa bixinta khadka inta lagu jiro hawsha daabacaadda; haddii nafwaayaha uu aad u yaryahay, madaxa khadku wuu qulqulayaa inta lagu jiro daabacaadda. Ink ayaa lagu keydin karaa 3-6 bilood heerkulka qolka caadiga ah. Haddii ay aad u dheer tahay ama ay keeni doonto roobab, waxay saameyn ku yeelan doontaa isticmaalka ama bareesada. Kaydinta khadku waa in la xidhaa si looga ilaaliyo qorraxda tooska ah. Heerkulku waa inuusan noqon mid aad u sareeya ama aad u hooseeya.
Shirkadayadu waxay dhoofisaa tiro badan oo gudaha iyo dibedda ah, sida khariidadda dareeraha eco, kharka dareeraha, khadadka sublimation, midabka midabka leh waxayna leedahay in ka badan 50 bakhaarro maxalli ah oo dibedda ah. Waxaan kuusoo bandhigi karnaa agab isticmaal wakhti kasta si loo hubiyo shaqada aan kala go 'lahayn. Nala soo xiriir si aad u hesho qiimaha khadadkaaga maxalliga ah.